January 11, 2021 - Myan News
စာချုပ်သစ်ကိစ္စ၊ အပြောင်းအရွှေ့ သတင်းအချို့နဲ့ တနင်္လာနေ့ညပိုင်း နောက်ဆုံးရ လီဗာပူးသတင်းများ
သတင်းထောက် Fabrizio Romano ဇန်နဝါရီ ဈေးကွက်မှာ လီဗာပူးက ပေါင် သန်း ၆၀ လောက် ပေးရမယ့် အူပါမီကာနိုကို မခေါ်ယူသေးပေမယ့် ခံစစ်မှူးသစ်တော့ အားဖြည့်နိုင်တယ်လို့ ဖွင့်ဟပါတယ်။ ၂၀၂၀ အတွင်းမှာ လီဗာပူးအသင်းဟာ ယူနိုက်တက် အရံှူးပေါ်ခဲ့တာရဲ့ ထက်ဝက်လောက် နည်းပါးတဲ့ ပေါင် ၄၅ သန်းဝန်းကျင် အရံှူးပေါ်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ လီဗာပူးအသင်းဟာ နောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာ ဂိုးပေါက် ခြိမ်းခြောက်မှုနဲ့ သွင်းဂိုးတွေ ကျဆင်းနေပြီး ဒါဟာ ပိုင်ဆိုင်မှုမှာ ပုံစံမကျဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကာ ဒီအပတ် ပွဲမကစားရချိန်မှာ အဆိုပါ… Continue Reading →
အယ်လီဆန်ကို ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ထံ ပို့ဖို့ အစွမ်းကုန် ကြိုးစားခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ အေးဂျင့်
ဘရာဇီးဂိုးသမား အယ်လီဆန်ရဲ့ အေးဂျင့်က သူ့ရဲ့ ကစားသမားကို လီဗာပူးထံ မရောက်ခင် ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ထံ ပြောင်းဖို့ အတော်လေး ကြိုးစားပေးခဲ့ပြီး အောင်မြင်လု အနေအထားထိ ရောက်ခဲ့တယ်လို့ ဝန်ခံပါတယ်။ ၂၀၁၈ နွေ အပြောင်းအရွှေ့တုန်းက လီဗာပူး၊ ချယ်ဆီးနဲ့ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ဟာ အယ်လီဆန်အတွက် သုံးပွင့်ဆိုင် ကြိုးစားခဲ့ကြတာပါ။ လီဗာပူးက အယ်လီဆန်ကို ခေါ်ယူနိုင်ခြင်းကြောင်း ရီးရဲလ်က ကော်တိုရစ်ကို ပြောင်းလဲ ခေါ်ယူခဲ့ပြီး ချယ်ဆီးကလည်း ကီပါကို ကမ္ဘာစံချိန်တင်ကြေးဖြင့် ထပ်မံ ခေါ်ယူခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ ” အဲ့တာက ထူးတော့ ထူးဆန်းနေပါလိမ့်မယ်။… Continue Reading →
လီဗာပူးနဲ့ ဆာလာကြား စာချုပ်သစ်ကိစ္စ၊ အပြောင်းအရွှေ့ ကိစ္စနဲ့ ပက်သက်ပြီး အင်တာဗျူး
နာမည်ကျော် အားကစားသတင်းထောက် Fabrizio Romano က GiveMeSport သတင်းဌာနနဲ့ မိနစ် ၃၀ အင်တာဗျူးရှည် တစ်ခုကို ပြုလုပ်သွားခဲ့တဲ့ထဲက လီဗာပူးအသင်းနဲ့ ဆာလာ တို့ရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ ကိစ္စနဲ့ စာချုပ်သစ် ကိစ္စတွေနဲ့ ပက်သက်လို့ ပြောဆိုမှုကို ဖော်ပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ GiveMeSport (Q): လီဗာပူးနဲ့ ဆာလာက ဒီနွေမှာ အပြောင်းအရွှေ့အကြောင်း စဉ်းစားသွားနိုင်မယ့် အခွင့်အရေး ရှိနေသလား? Fabrizio Romano (A): ဒီအခြေအနေမှာ ဆာလာက အပြောင်းအရွှေ့အတွက် စိတ်ဝင်စားလား? သေချာတာပေါ့… Continue Reading →
လီဗာပူးနဲ့ပွဲမှာ သူ့ရဲ့ အဓိက ကစားသမား (၃) ဦး ပြန်ပါမယ် ထုတ်ပြောလာတဲ့ ဆိုးရှား
ယူနိုက်တက်မန်နေဂျာ ဆိုးရှားက အမှတ်ပေးဇယား ထိပ်ဆုံး တစ်နေရာအတွက် ယှဉ်ပြိုင်ရမယ့် လီဗာပူးပွဲမှာ သူ့အသင်း အဓိက ကစားသမား ၃ ဦး ပြန်လာမယ်လို့ ထုတ်ပြောလာပါတယ်။ ဇန်နဝါရီလ ၁၇ ရက်မှာတော့ အန်ဖီးကွင်းမှာ လီဗာပူးနဲ့ ယူနိုက်တက်တို့ ထိပ်တိုက် ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာပါ။ နှစ်သင်းလုံးက ရမှတ်တူအဖြစ် ၃၃ မှတ် ရထားကြတာဖြစ်ကာ မနက်ဖြန်မှာ ယူနိုက်တက်က ဘန်လေဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။ ယူနိုက်တက်မှာ လင်ဒီအော့၊ လုရှောနဲ့ ပေါ့ဘာတို့ သုံးဦးက ဒဏ်ရာရနေတာဖြစ်ပြီး လီဗာပူးကို ရင်ဆိုင်ရမယ့်ပွဲမှာ သူတို့… Continue Reading →
ဗန်ဒိုက် ပြန်ကစားနိုင်မယ့် အချိန်ကို ခန့်မှန်း ပြောဆိုလာတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ကစားသမားဟောင်း
အင်္ဂလန်ကစားသမားဟောင်းနဲ့ မန်နေဂျာဟောင်းဖြစ်သလို လက်ရှိမှာ အားကစားသုံးသပ်သူအဖြစ် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ချာတန် ပါမယ်က လီဗာပူးခံစစ်မှူး ဗန်ဒိုက်ဟာ သိပ်မကြာခင် ဘောလုံးပြန်ကစားနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ကြောင်း ထုတ်ပြောလာပါတယ်။ နယ်သာလန်သား ခံစစ်သမားဟာ ACL ဒဏ်ရာကြောင့် ကာလရှည် အနားယူရမယ်လို့ သိထားရတာပါ။ ဒါပေမယ့်လို့ ဗန်ဒိုက်ရဲ့ အခြေအနေနဲ့ ပက်သက်ပြီး ကလပ်ဘက်က အသေးစိတ်တွေ ထုတ်မပြောသလို ဗန်ဒိုက် ကိုယ်တိုင်ကလည်း လေ့ကျင့်ရေး ဗီဒီယိုတွေ တင်နေတာကလွဲလို့ သိပ်ပြီး ထုတ်ပြောလေ့ မရှိဘူး။ သို့ပေမယ့် ဒီဇင်ဘာတုန်းက ထူးထူးခြားခြားအဖြစ် ဗန်ဒိုက်က မကြာခင်မှာ… Continue Reading →
ကာလတိုအတွက် လီဗာပူးအသင်း ခေါ်ယူဖို့ စဉ်းစားသင့်တဲ့ ခံစစ်မှူး (၆) ဦးကို ဂျွန်ဘမ်း ရွေးထုတ်
လီဗာပူး ဂန္တဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ ဂျွန်ဘမ်းက အသင်းဟောင်းဟာ ဇန်နဝါရီမှာ ကာလရှည်အတွက် ရည်ရွယ်တဲ့ ခေါ်ယူမှု မလုပ်ဘူးဆိုရင်လည်း ကာလတိုအဖြစ် ခေါ်ယူရာမှာ အဆင်ပြေမယ့် ကစားသမားတွေကို ရွေးထုတ်ပေးခဲ့မှုအား ဒေးလီးမေလ်းက ဖော်ပြသွားပါတယ်။ Aissa Mandi – Real Betis မန်ဒီဟာ လီဗာပူးက လိုဗရန်နေရာ အစားထိးဖို့ ခေါ်ယူမယ်ဆိုပြီး သတင်းကြီးတွေ ထွက်ထားခဲ့သူပါ။ အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ် ခံစစ်မှူးက မနှစ်က ပွဲ ၃၀ လောက် ကစားခဲ့ရသလို ဒီရာသီမှာလည်း ၁၂ ပွဲ… Continue Reading →
မရင်းနဲ့ စပါးတို့ရဲ့ အက်ဖ်အေပွဲကို ယာဂင်ကလော့ပ် ပုံတူ သယ်လာပြီး လာအားပေးတဲ့ မရင်းပရိသတ်
မနေ့ညတုန်းက မာဆေးဆိုဒ်မှာ အပျော်တမ်းကလပ်ဖြစ်တဲ့ မရင်းနဲ့ စပါးအသင်းတို့ဟာ အက်ဖ်အေ တတိယအဆင့်ပွဲစဉ်ကို ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါတယ်။ အင်္ဂလန်အဆင့်နိမ့်တန်းမှာ ကျင်လယ်နေပြီး အပျော်တမ်း ကလပ်တစ်သင်းလည်းဖြစ်တဲ့ မရင်းအသင်းဟာ လီဗာပူးမြို့မှာ အခြေစိုက်တဲ့ ကလပ်တစ်သင်းဖြစ်တယ်။ ကလပ်ရဲ့ အသင်းသား အများအပြားက ရေပိုက်သမားတွေ၊ ကျောင်းဆရာတွေနဲ့ အားကစားဌာနတွေမှာ အလုပ်လုပ်ခြင်းနဲ့အတူ ဘောလုံးကို ပူးတွဲ ကစားနေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ မရင်းပရိသတ်တွေဟာ သူတို့အသင်းရဲ့ ပွဲကို အိမ်နောက် ဥယာဉ်ကနေကို ထိုင်ပြီး ကြည့်နိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးပါ။ ၎င်းတို့ရဲ့ ကွင်းဟာ ပရိသတ် ၃၀၀၀… Continue Reading →
ဇန်နဝါရီ အပြောင်းအရွှေ့မှာ ပွဲကစားခွင့်အတွက် လီဗာပူးက ထွက်ခွာမယ့် လူငယ် (၅) ဦး
ကုန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ခွဲ ကာလဟာ နယ်သာလန်သား ခံစစ်မှူး ဗန်ဒန်ဘယ်ရာအတွက် အတော်လေး ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ လီဗာပူးကို ရောက်လာတဲ့ ဗန်ဒန်ဘယ်ရာဟာ မျှော်လင့်သလို စွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်း မရှိဘဲ ရုန်းကန်နေရတယ်။ အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ်ပဲ ရှိသေးတဲ့ ခံစစ်သမားဟာ ယူ-၂၃ အသင်းအတွက် ကစားပေးနေပြပီး အကယ်ဒမီအဆင့်မှာ ၉ ပွဲထိ ကစားခွင့် ရထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လို့ စီနီယာအသင်းမှာတော့ လူစားလဲခြင်း မခံရတဲ့ ပွဲစဉ် တစ်ပွဲတည်းမှာ အရန်ခုံက ရှိနေခဲ့တာပါ။ ခံစစ်သမားက တိုးတက်နေပေမယ့်… Continue Reading →